ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းနေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်လိုက်ပါအုံးပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. – Sport Gaber
ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းနေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်လိုက်ပါအုံးပရိတ်သတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ဟာသလူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ဒီနေ့မှာ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ သူကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး “ချွန်တွန်း” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ပရဟိတလူမှုကူညီရေး အသင်းလေးတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစတင်ဝင်ရောက်လာချိန်ကတည်းက စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေအလှူငွေတွေလှူဒါန်းပေးခြင်း နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ မီးဖွားနိုင်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ သြဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့မှာလည်း ဒိန်းဒေါင်က သူ့ရဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့နဲ့အတူ စားသောက် ကုန်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းပေးတဲ့ အလှူလေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အလှူလေးကို ကြည်နူးပီတိဖြစ်လို့ရအောင် ဒိန်းဒေါင်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မှတ်တမ်းတင်မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒိန်းဒေါင်တို့ ပရဟိတအဖွဲ့ရဲ့အလှူလေးကို ပရိသတ်ကြီးတွေက သာဓုခေါ်ဆိုပေး ခဲ့ကြပါဦးနော်။
ပရိသတျတှရေဲ့ အခစြျတောျဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ ဟာသလူရှှငျတောျ ဒိနျးဒေါငျကတော့ ဒီနေ့မှာ စားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျလှူဒါနျးတဲ့ အလှူလေးကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒိနျးဒေါငျကတော့ သူကိုယျတိုငျ ဦးစီးပွီး “ခြှနျတှနျး” လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ပရဟိတလူမှုကူညီရေး အသငျးလေးတဈခုကို တညျထောငျထားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါစတငျဝငျရောကျလာခြိနျကတညျးက စားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျတှအေလှူငှတှေလှေူဒါနျးပေးခွငျး နဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ မီးဖှားနိုငျရေးအတှကျ တတျနိုငျသမြှအစှမျးကုနျကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီနေ့ သွဂုတျလ (၇)ရကျနေ့မှာလညျး ဒိနျးဒေါငျက သူ့ရဲ့ ပရဟိတအဖှဲ့နဲ့အတူ စားသောကျ ကုနျလှူဒါနျးတဲ့ အလှူလေးကို ပွုလုပျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
တကယျခကျခဲနတေဲ့ပွညျသူတှအေတှကျ လှူဒါနျးပေးတဲ့ အလှူလေးဖွဈပွီး ပရိသတျတှလေညျး အလှူလေးကို ကွညျနူးပီတိဖွဈလို့ရအောငျ ဒိနျးဒေါငျက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကြျနှာကနေ မှတျတမျးတငျမြှဝဖေောျပွထားခဲ့ပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ ဒိနျးဒေါငျတို့ ပရဟိတအဖှဲ့ရဲ့အလှူလေးကို ပရိသတျကွီးတှကေ သာဓုခေါျဆိုပေး ခဲ့ကွပါဦးနောျ။
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း